IINGCAMANGO ZEGUMBI LASEPOOJA NGOKUBONISA UMNYHADALA WEVARALAKSHMI - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IKHAYA-N-IGADI
Iingcamango zegumbi lasePooja ngokuKhangela kuMnyhadala weVaralakshmi
Ekhaya Ikhaya n igadi Ukuhombisa Umhombiso oi-Anjana NS Ngu UAnjana Ns Nge-10 ka-Agasti ka-2011
Namhlanje, siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zokuhombisa igumbi le-pooja kumnyhadala we-Varalakshmi. Thatha ujongo.
Kukholelwa ukuba isithixokazi lakshmi sizisa ukuchuma kunye nobutyebi emakhayeni ethu nakwiminyhadala ye-varalakshmi, abasetyhini bamkela isithixokazi kwaye benze poojas kwigumbi elihonjiswe kakuhle.
Iingcamango zegumbi lasePooja ngokuKhangela kuMnyhadala weVaralakshmi-
1. Ukucwangciswa Kwemali - Njengoko uLakshmi enguthixokazi wobutyebi, wonke umgangatho wegumbi le-pooja uzele ziingqekembe zemali eziqaqambileyo. I-1, 2 kunye ne-5 ihlelo ziqokelelwe kwaye zahlelwa njenge-rangoli phantsi. Nokuba imantap inamathele kwiingqekembe. Kule mihla side safumana imibala yegolide enemibala emi-5 enokuqokelelwa kwaye ilungiswe kulo lonke igumbi. Oku kunika ingqekembe yegolide ukujonga kwigumbi le-pooja.
Mbini. Ulungiselelo lwenqaku Amanqaku angama-10, 20 nama-50 ama-rupee angasetyenziselwa ukuhlobisa igumbi le-pooja. Hlela amanqaku njengamakhadi okudlala phantsi kwaye enza iRangoli ngokwayo. Usenokude uwaqinise ngononophelo amanqaku ama-rupee kwi 'Thoranas '/ festoons. Ukuhombisa ngamanqaku kulula njengoko zilula kwaye zinemibala.
3. Amalungiselelo eLotus - Kuba varalaksmi uhlala ephethe i-lotus (uthanda iintyatyambo ze-lotus), ungenza amalungiselelo e-lotus kwigumbi lokuthandazela. Beka i-lotus ende enesitshixo ekungeneni kwemantap. Beka inqanawa ezaliswe ngamanzi kwaye uyihombise ngee-diyas kunye neepalali ze-lotus. Amagqabi angalungelelaniswa kwakhona kwindlela yegumbi le-pooja.
Zine. Amalungiselelo eAshta Lakshmi - Njengoko sonke sisazi, isithixokazi lakshmi saziwa ngamandla ayo asibhozo athi ngu-Adi lakshmi, Dhana lakshmi, dhairya lakshmi, vidya lakshmi, santana lakshmi, vijaya lakshmidhanya lakshmi kunye gaja lakshmi. Ungazithengela imifanekiso eqingqiweyo okanye imilo ye-ashta lakshmi yokuhombisa igumbi le-pooja kwaye ucwangcise malunga nemantap nkqu nakwiindonga. Unokuthatha nokuprintwa kwekhompyuter kwaye usike igumbi likathixo kunye nefesto.
5. Inethi Umxholo -I-Lakshmi ngokubanzi ibonakaliswa ngombala obomvu ukuhombisa i-pooja ngombala womxholo ujongeka wahlukile kwaye ukhethekile. Thenga iintyatyambo ngombala obomvu kwaye uhombise umgangatho ngerangolis egcwele ebomvu. Iintyatyambo ezibomvu ezibomvu zijongeka intle kakhulu kumhombiso womxholo. Thenga isarayi ebomvu kunye nerubhi enamatye anqabileyo athixokazi.
imibono yokhuphiswano lwengubo entle kwintombazana
Izinto ezingeloncedo kwimastrabation kwindoda yonke imihla
Uyilo lwesuti yoyilo ngu-manish malhotra
utya ntoni ngokuzila ukutya nge-navratri
Ungayifumana njani imilebe egqibeleleyo
Izibonelelo zokubeka i-ghee kwinkaba